Guddoomiye Jawaari oo iscasilaadiisa uga hor dhawaaqay Golaha Shacabka – Radio Muqdisho
Guddoomiye Jawaari oo iscasilaadiisa uga hor dhawaaqay Golaha Shacabka
Kulanka guud ee golaha oo uu shir guddoominayay kusimaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka ahna Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Mudane C/wali Sheekh Ibraahim Muudey ayaa ugu horeyn waxaa khudbadiisa dhiibista xilka Guddoomiyanimo ee Golaha Shacabka ka jeediyay Guddoomiyihii Golaha Shacabka ee JFS Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ugu mahad celiyay guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed dareenkii wadanimo oo ay muujiyeen, waxaana uu si rasmi ah xilkii Guddoomiyanimo ugu celiyay Golaha oo uu maanta hor tagay.
Guddoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in dhowr sababood oo uu u arkay danaha qaranka iyo badbaadada Golaha Shacabka ay keentay inuu ka tanaasulo xilkii Guddoomiyenimo ee Golaha Shacabka.
Waxa uu mahad celin balaaran u jeediyay xildhibaanada Golaha Shacabka,waxaana sidoo kale wuxuu kula dar daarmay in ay iska ilaaliyaan wax walba oo sababaya burburka Golaha iyo in lagu xad gudbo.
Sidoo kale xildhibaanada Golaha ayuu kula dar daarmay in xilka uu isaga baneeyay ee Guddoomiyanimo ee Golaha ay u doortaan qof ka shaqeyn kara horumarka iyo Midnimada Golaha.
Guddoomiye Jawaari waxa uu sheegay inaanu waxba ka jirin warar tan iyo markii uu isagu is casilay lagu qorayay baraha bulshada oo ah inuu lacag ku qaaatay is casilaadiisa isagoo tilmaamay inaanu waxba ka jirin wararkaasi.
Ugu dambeyn waxa uu sheegay Guddoomiyihii Golaha Shacabka inuusan Golaha meelna uga socon islamarkaana ka xildhibaan ahaan uu ka shaqeyn doono horumarka iyo midnimada dowladnimad Soomaaliyeed.
Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Gudoomiyihii Golaha Shacabka ee JFS ayaa markii ugu horeysay xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya loo doortay 28-kii Agoosto sanadkii 2012-kii isagoo ahaa ilaa dhamaadkii 2016-kii, waxaana mar kale 11-kii Bishii Januray sanadii 2017-kii loo doortay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee JFS.
Mudanayaasha Golaha Shacabka ayaa sida uu qabo xeer hoosaadka Golaha Shacabka mudo 15-maalin ah oo ka bilaabaneysa maalinta uu gudoomiyaha iscasiladiisa Golaha ka hor sheego oo maanta ah kusoo dooranaya Gudoomiye Cusub.
FAALLO:Munaasabadda 12-ka Apriil ee aas-aaska Ciidanka Xoogga Dalka oo Muqdisho ka dhacday